स्वास्थ्य पेजभोलिदेखि १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई मोडर्ना खोप, बाँकेमा कहिले ? - स्वास्थ्य पेज भोलिदेखि १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई मोडर्ना खोप, बाँकेमा कहिले ? - स्वास्थ्य पेज
भोलिदेखि १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई मोडर्ना खोप, बाँकेमा कहिले ?
नेपालगन्जः सरकारले भोलिदेखि १२ वर्षदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउँदैछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मोडर्ना खोपको पहिलो मात्रा यही पुस ४ देखि १४ गतेसम्म विद्यार्थीलाई लगाउने भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा संगीता मिश्राले जानकारी दिनुभयो ।
लुम्बनी प्रदेशको रुकुमपूर्व, रोल्पा, प्यूठान, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, नवलपरासी पश्चिम, कपिलवस्तु र बर्दियामा खोप लगाइने छ । बाँकेमा भने दोस्रो चरणमा खोप लगाइने बताइएको छ । तर कहिले टुंगो छैन् ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यान तथा सुदूरपश्चिमका बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, बैतडी, डोटी, अछाम र कञ्चनपुरसहित ५७ जिल्लाका सो उमेर समूहका विद्यार्थीले खोप लगाउने भएका छन् ।
ती जिल्लाका विद्यार्थीलाई दोस्रो मात्रा भने माघ २ देखि १२ गतेसम्म लगाइने छ ।